Maamulka Puntland oo sheegatay weerar lagu qaaday saldhigyo ku yaalla Magaalada Laascaanood - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Maamulka Puntland oo sheegatay weerar lagu qaaday saldhigyo ku yaalla Magaalada Laascaanood - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maamulka Puntland ayaa sheegtay markii ugu horeysay inuu ka danbeyay Weerar xalay ka dhacay magaalada Laas-caanood oo lagu qaaday saldhigyo ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin Magaalada.
Guddoomiyaha Gobolka Sool ee Puntland dhowaan magacowday Abuubakar Cabdi Geelle ayaa sheegtay in Ciidamo ka tirsan Puntland ay xalay weerar ku qaaadeen laba saldhig oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool.
Wuxuu sheegay in weerarka oo qorsheysnaa ay ciidamaduii qaaday ku guuleysteen in Xabsiyada ka siidaayeen Maxaabiis u xirnaa Somaliland, wuxuuna Shacabka gobolka Sool ugu baaqay inay ka qeyb galaan dagaallada la isaga xoreynayo Somaliland.
Arrintan ayaa noqoneysa markii ugu horeysay ee ciidamo taabacsan Puntland ay weerar ka geysteen gudaha magaalada Laas-caanood ee ay maamusho Somaliland.
Previous articleWarbixin: Fursadaha uu heysto Madaxweyne Erdogan in dib loo doorto [Loolanka adag ee Doorashada Turkiga]
Next articleTaliye xigeen & Saraakiil Boolis oo loo xiray Qaraxii Addis & Dhimashada dadkii dhaawaca ahaa oo korortay